नब बर्षको अर्थ के लगाउने ?
आज नया बर्ष २०१९ शुरु भएको छ । आजभन्दा ठीक एक सय बर्ष पहिलाको समयलाई हेरौंं । भर्खर बिश्वलाई नै भेदन गर्ने एउटा दूरगामी र प्रभावकारी क्रान्तिबाट बिश्व गुज्रेको थियो पहिलो बिश्व युद्ध पछि १९१७ मा ! शोषित पीडित पददलित अत्यधिक मानिसहरुको मुक्तिको हावा बिश्वभरी नै चल्न शुरु गरेको थियो । यसका लागि देशहरु, जनताहरु छटपटाइरहेका थिए । मुक्तिको कामना साकार हुने समयको खोजी गरिरहेका थिए । बिचारको बेग त्यतैतिर प्रबाहित थियो नयाँ संसारको खोजी — एउटा उच्चतम मानबीय सभ्यताको बिकल्पको मूलबाटो ! त्यसको प्रभाव र आभा अझै पनि चलिरहेको छ स्वभाविक अस्वाभाविक उतार चढावका साथ ! हो यसरी नै समय गतिमान हुने क्रम चलिरहन्छ र चलिरहेको छ बिगतदेखि बर्तमानसम्म !
संक्षेपमा भन्न पर्दा बर्षै पिच्छे यस्ता नयाँ बर्षहरु आउँछन् जान्छन् । यस प्रकार नब बर्षको यथार्थ के हो भन्ने कुरा नबुझी केवल औपचारिकता पूरा गरेर यो समाप्त हुन्छ । यही क्रम पुनः दोहो¥याउने गरिन्छ । ्नयाँ बर्षमा अन्तरनिहीत भावनाको गहिरो र गम्भीर अध्यन,चिन्तन, मनन र अनुगमन केही हुदैन । अहिलेसम्मका हाम्रो इतिहासका कालखण्डहरु यसरी बित्दै गएका छन् । नब बर्ष केवल नयाँ समयको पर्व मात्र होइन । यो जीजीबिषा,सामुहीकता, बैभव, समृद्धिको कामना, संकल्प, नूतनताको उन्मेषको प्रकटीकरण पनि हो । बिषादको छायाँको बिरुद्ध नबीताको उद्घोष पनि हो ।
वास्तवमा बिगत बर्षले हामीबाट हाम्रो आकलन र मूल्यांकन चाहन्छ । नयाँ बर्ष उज्यालो बिम्बको रंगीन माछा जस्तै हाम्रो मनको संरचनामा छचल्किन्छ । नब बर्षको पक्ष आवश्यकरुपले बिगत बर्षको अघिल्लो चरण हो । यो मिठो, अमिलो,तीतो,पीरो, टर्रो आदि बिभिन्न स्वादहरुबाट संपृक्त छ । नयाँ बर्षले बिगत बर्षको सन्धि बिन्दूमा हामीलाई धेरै पटक एकान्त चिन्तन मननको सुविधा प्रदान गर्दछ । नब बर्षले हामीलाई भबिष्यका दृष्यहरुसँग परिचय गराउनतिर लैजान्छ । हाम्रो दृष्टिमा संसार उसै पनि युग्महरुबाट सिर्जित छ ः पुरानो या नयाँ, परम्परा या आधुनिकता, स्थिर या जंगम आदि इत्यादिबाट । नयाँ समयको अर्थ आत्माको रंगमा नयाँ सिर्जनाको संकल्पको रुपमा जोडिएको हुन्छ ।दुःख, बिषाद अभाव,बेरोजगारीको बज्र र संकट – यी सबै कुरा हुँदाहुदै पनि नब बर्षले हामीलाई नयाँ दुष्चक्रलाई भेदन गर्नतिर आलोकित गराउँदछ र यसका लागि उष्मा तथा ऊर्जा दिन्छ ।अनि यही नै वास्तवमा यसको महिमा गानको अर्थ पनि हो ।
यो सही कुरा नै हो कि काल अनन्त र प्रवाहमान हुन्छ । त्यसैको कुनै खण्डमा हामी बाँचेका हुन्छौ । हाम्रा स्मृतिहरु र आकांक्षाहरु समय सापेक्ष हुन्छन् र कतिपय समयलाई अतिक्रमित गर्ने खालका कालभेदी पनि । जुन आकांक्षाहरु साबधिक हुन्छन् तिनको आफ्नो सीमा पनि अबश्य हुन्छ । मानिसले भने प्रायः सधैंजसो ती सीमाहरु तोडने गर्दछ र तोडिरहेको हुन्छ । मानिस ससीमबाट असीमतिर बढ्ने गर्दछ । यही नै मानिसको ब्यक्तित्वको घनत्व पनि हो । मानिस ब्यष्टिबाट समष्टितिर बढ्छ । ऊ नीजताकासाथसाथै समूहबद्ध पनि हुन्छ । आज बिश्वमा भएका बिभिन्न परिवर्तनहरु यही समूहबद्ध र समूहवाची हुनुका परिणाम नै हुन् । यसको यो अर्थ कदापि होइन कि ब्यक्तित्वको आन्तरिकताको महत्व कम भएको छ । बरु यसको बिपरीत आजको बढ्दो होहल्ला र आक्रामकताको माहोलमा नीजताको प्रतिष्ठाको अर्थबत्ता अझ बढ्न गएको छ । नब बर्षमा परिवर्तनको कामनाका साथै ब्यक्तित्वको नीजताको पनि एकै साथ सम्बल प्राप्त हुने अभिष्ठ छँदैछ । आज ब्यक्तित्व बिलोपित भइरहेको छ । अर्थात् ब्यक्तित्वहीन ब्यक्तित्व । साहित्य, कला र सँस्कृतकि आन्दोलन आदिले आज ब्यक्तित्वहीनताका यी नै आवरणलाई उतारिरहेका छन् मूर्त या अमूर्त दुबैरुपमा ।
यो निश्चित हो कि एक बर्षको प्रतिक्षा पछि नब बर्ष आउने गर्दछ । यो धीरज स्मृतिहरुमा सम्पूजित हुने गर्दछ । बिगतको प्रत्येक क्षण गन्ध र प्रकाश जस्तै या कहिलेकाही अन्धकार जस्तै हाम्रो मनमा अस्तित्वको हिस्साकोरुपमा पराबृत्त भइरहन्छ । जुन राम्रो छ त्यो स्फटिक जस्तै हुन्छ । यस दृष्टिले हाम्रा अनु भावहरुमा ती प्राप्त हुन्छन् र समकाकलीनताको दृष्यांकन गर्ने गर्दछन् । हाम्रो लोक समाजमा भूत, भबिष्यको लेखाजोखा एउटा आवेग जस्तो हुन्छ जसमा अनगढता र आदिम उष्मा रहेको हुन्छ । हामी त्यसैले आफ्नो ज्योति पुञ्जकोरुपमा नब बर्षलाई लिन्छौ जसले हामीलाई आलोकित गरोस् । प्रस्तुत बर्ष वास्तवमा परिवर्तनको बर्ष हुन्छ । प्रत्येक क्षणले पनि उसो त परिवर्तन नै ल्याइरहेको हुन्छ । तर यहाँ परिवर्तको बृहत अर्थको कुरा गरिदैछ । त्यो अर्थ हो – सरोकारवालाहरुको दृष्टिबोध बद्लिनु,ब्यवस्थासँग मोहभंग,सडेगलेका पक्षहरुमाथि प्रहार,नश्ल, बर्ण, भाषा, क्षेत्रका अतिचारबाट मुक्ति । नब बर्षको अपेक्षा र मूल्य मान्यताको यही अर्थ हुनु पर्दछ र हो । सधै र सबैका लागि ।
समाप्तिको संघारमा पुग्दैछन् हिम नदी
सगरमाथा जोगाऔ, पर्याबरणमैत्री बनौं, सार्थक कदम चालौं !